"Midaan Naxdin waa dhaaftay..." - Boqolaal Dhalinyaro Soomaali ah la la'ayahay // Daawo | KEYDMEDIA ONLINE
“Midaan Naxdin waa dhaaftay…” - Boqolaal Dhalinyaro Soomaali ah la la’ayahay // Daawo
Keydmedia Online - 94 ilaa iyo hada Maydkooda la helay, 151 la badbaadiyay iyo in kabadan 250 Qof oo wali la la'yahay. "Waa argagax aan loo adkeesan karin" ayuu yiri Duqa Lampedusa.
Wararka Caawa - 21.00:
Jaraa'idka Talyaanigga ayaa Caawa Shaaciyay in illaa iyo Caawa 300 Qof Meydkoodii laga soo saaray Badda, ugu yaraanah Boqol Qof wali waa la la'yahay.
Soomaalida ayaa lagu Qiyaasayaa 200 oo Qof, waa Warka Caawa laga helayo Lampedusa.
47 Soomaali ah oo midka ugu weyn uu jiro 22 Sano ayaa ilaa iyo Caawa (Khamiis, 21.30) la sheegay in la badbaadiyay "Dhalinyarada aan Galabtay badbaadinay kuligood waa Qaawanaayeen, ma garan karno Sababta" Ayuu yiri Mas'uul la hadlay Warbaahinta Talyaaniga.
Ma ahan markii ugu horeysay laakiin waxaa hubaan ah in ay tahay Musiibadii ugu xumeed oo ka dhacday Badda Talyaaniga.
Sidaan Maantay soo Qornay, Illaa iyo hada 94 Qof Meydkoodii ayaa laga soo saaray Badda Jasiiradda Lampedusa, kadib markii ay Gubatay Doon ay saarnaayeen.
Doonidan oo ka baxday Xeebta Liibiya ayaa waxay ku dagtay meel u dhaw Jasiiradda Lambaduusa oo ku taalla Koonfurta Talyaaniga markii uu dab-qabsaday, iyadoo tahriibayaashan ay u badnaayeen Soomaali iyo Eritreyaan. Wali ma cada inta Soomaali oo ku jirtay Doontaani, laakiin Dadkii la badbaadiyay ayaa sheegay in ugu yaraan 240 ay ahaayeen Soomaali.
Tahriibayaashan ayaa waxa ay ka koobnaayeen 500 oo Qof oo ay ku jireen Ilmo iyo Haween badan oo qaarkood ay Xaamilo yihiin.
Duqa Lampedusa, Giusy Nicolini oo Warbaahinta la hadlay ayaa Dhacdadaan ku tilmaamay midii ugu xumeed oo ka dhacday Badda Lampedusa.
"Waxa na horyaala, Waa Musiibo Bin'aadniga ku habsatay (...) Waa argagax aan loo adkeesan karin" Ayuu yiri Duqa Magaalada.
Qeylo dhaanta ayaa waxey kasoo yeertay Niman ka kaluunsanayay Badda, waxaana la sheegay in Doonta ay la socdeen Dadkaas Muhaajiriinra ah uu Dab Qabsaday, markii loo gurmaday ayaa waxaa la arkay in Maydad sabeenaya Biyaha Dushooda, waxeyna ka koobnaayeen Caruur Da'a yar iyo Haween Qaarkood Uur lahaa.
Maxkamad ku taalla Magaalada Agrigento ayaa waxey furtay Gal dambi baaris oo ay rabto in ay u kuurgasho Qaabka Musiibadu ay ku bilaabatay.
Ilaa hada Maydadka Banaanka la keenay oo Go' yaalka Cad lagu daboolay ayaa waxey marayaan 94, walina waxaa maqan 270 Qof
Qolladii Maydadka soo daadgureesay mid kamid ah ayaa si careysan wuxuu u yiri "R/wasaaraha Talyaanigga Letta ha yimaado halkaan oo hanala tiriyo Maydadka, maxaa Dadkaan wax loogu qaban waayay, inteesan Degaankooda kasoo haajirin?" Waa sidee soo Qortay Warbaahinta Talyaanigga.
Mid u hadlay Laanqeyrta Cas ee Talyaaniga ayaa wuxuu yiri "...Midaan Naxdin waa dhaaftay oo Musiibo waa ka weyntay, waayo kuligoos waa Dhalinyaro, waa Soomaali, waa Eriteriyaan, waa Kongolees ay suurtowdo in ay Qaarkood Jaamacaddo kasoo baxeen oo ay Maantay Maydkoodi halkaan Daadsanyahay (...) waxaase nooga sii daran xataa Magacyadoodi lama yaqaano..."
Hay'adda Laanqeyrta Cas ee Talyaaniga ayaa sheegtay in ilaa Sanadkii 2002 ay tiriyeen 6200 oo Qof oo uu badan Soomaali iyo Eritreyaan.
Keydmedia Online - Xafiiska Nairobi & London | Editorial Desk